Zihamba phambili ezakwa-Toyota | Isolezwe
Zihamba phambili ezakwa-Toyota
Isolezwe / 16 August 2012, 2:18pm /
IZIMOTO zakwa-Toyota zihamba phambili ngokwethembeka uma ziqhathaniswa nezimoto ezikhiqizwa ezinye izinkampani
UMA uhamba ngemoto yakwa-Toyota kumele uzishaye isifuba ngokuthi uhamba ngemoto ehamba phambili emhlabeni jikelele.
Lokhu angikusho ngoba ngisuka eZimbokodweni lapho imboni yale nkampani enkulukazi eNingizimu Afrika izinze khona, kodwa kufakazelwe imiphumela yocwaningo olubizwa nge-Sunday Times Top Brands Survey for 2012.
Umphumela walolucwaningo ubeke phezulu eqhulwini izimoto zakwa-Toyota njengezithandwa kakhulu ngabantu emhlabeni.
Isikhulu sakwa-Toyota emkhakheni wezokukhangisa nokudayisa uCalvyn Hamman uthe umyalezo wabo usobala kakhulu. Uthi okunye okubabeka phambili ukuthi izimoto zabo zithembekile. Uveze nokuthi bahlale njalo behamba phambili ngokwazisa amakhasimende abo ngokuqhubekayo. Uthe izimoto zabo zakamuva njenge iYaris HSD kanye ne 86 sports okuyizimoto ezisanda kwethulwa zilinyusile izinga lezimoto zakwa Toyota kwezobuchwepheshe.
“Ungaba nemikhankaso ehamba phambili emhlabeni yokukhangisa umkhiqizo wakho, kodwa nayo kumele ihambisane nokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende,” kusho uHamman.
Uthi isiqubulo sabo kwa-Toyota kuwo wonke amazinga ukuthi njalo bahlale benza amakhasimende abo aneliseke ajabule ngaso sonke isikhathi.
Ngesikhathi kwenziwa lolu cwaningo kukhulunywe nabantu abangaphezulu kuka 3 500 abangaphezu kweminyaka engu 18 abaqhamuka emikhakheni ehlukene. Phakathi kwezinto ebezibuzwa abantu ukuthi izimoto zezinkampani zithembeke kanjani, kanjalo nomuzwa wobumnandi wokuhamba ngazo. UToyota uphume phambili.